Ikea oche Bernhard (otu n'ime naanị ụlọ ọrụ ezigbo nri :-)) - 8 dị na ngwaahịa - The Ezi Stuff Factory
Home / Oche / Ikea oche Bernhard (otu n'ime naanị ụlọ ọrụ nri dị mma :-)) - 8 na ngwaahịa
Ikea oche Bernhard (otu n'ime naanị ndị ụlọ ọrụ ezigbo nri :-)) - 8 dị
Anyị enweghị oche Ikea kwa ụbọchị. Ndị a bụ ... oche nke anyị zụtara tupu anyị amalite akụkọ GOOD STUFF. Yabụ na anyị nwere ike ịsị na anyị mesoro ha nke ọma mana ha ga-enwerịrị ụzọ maka oche oche Galvanitas S16.
Enwere ike ịzụta oche ndị a dị ọhụrụ na Ikea maka euro 129 euro ọ bụla. N'ebe anyị nọ ọ bụ € 50 maka otu ihe.
- € 50 kwa otu
EKWU: Ruo oche 2 anyị nwere ike ibupu na DPD na € 15 kwa ngwungwu. Europe na € 15 na € 25 kwa ngwugwu.
Atiya: Oche Tag: Ikea Bernhard